Nahazo Sazy 10 Taona An-tranomaizina Tsirairay Avy Ireo Tanora Roa Mpikatroka Nanao Graffiti Tamin’ny Sarivongan’ny Patriarkan’i Azerbaijan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Desambra 2016 4:13 GMT
Hajia fahatsiarovana ny fivorian'i Heydar Aliyev’ niaraka tamin'ny filoha Rosiana Vladimir Putin tao Baku tamin'ny 2001. Maty tamin'ny faramparan'ny 2003 izy. Creative commons.
Tamin'ny 8 Desambra, nanameloka mpikatroka 21 taona, Bayram Mammadov higadra 10 taona an-tranomaizina ho mikasika zava-mahadomelina ny fitsarana tao Baku renivohitr'i Azerbaijan, azo inoana fa fitoriana namboamboarina. Maro no mihevitra fa ny tena heloka bevava nanamelohana azy ireo dia noho ny fanaovana graffiti teny amin'ny sarivongan'ny filoha teo aloha Ilham Aliyev efa maty hatry ny ela sady rain'ny mpitondra manjakazaka ankehitriny ihany koa, .
Vao herinandro vitsivitsy talohan'io, voaheloka higadra 10 taona an-tranomaizina noho io fiampangana io ihany ny tanora mpikatroka iray hafa, 22 taona, Giyas Ibrahimov . Mino ireo mpanohana an'i Ibrahimov fa voasazy izy noho ny fanovana ny endriky ny sarivongan'i Aliyev hifangaro amin'ny endrik'i Mammadov ihany koa.
Andro mampalahelo ho an'ny tanora ao #Azerbaijan mpikambana N!DA iray hafa hatramin'izao no voaheloka higadra 10 taona #BayramMammadov @a_hesenov5 pic.twitter.com/ZT5YJnmhSu
#Azerbaijan: mpikatroka @nidavh iray hafa , #BayramMammadov, voaheloka higadra 10 taona an-tranomaizina noho ny #graffiti https://t.co/hjby6Kl6ty
Nanameloka ilay mpikatroka #BayramMammadov higadra 10 taona an-tranomaizina noho ny hetsi-panoherana tamin'ny alàlan'ny graffiti ny Fitsarana ao #Azerbaijan. Raiso ny fepetra izao: https://t.co/ZYAT8YLp5E
Nanomboka nitondra an'i Azerbaijan talohan'ny fahaleovantena tamin'ny taona 1991 ny fianakaviana Aliyev, ary heverina ho toy ny iray amin'ireo foko politika mpanao kolikoly indrindra any amin'ny Firaisana Sovietika teo aloha. Fianakaviana patriarika i Heydar Aliyev sy manamarika ny fanjakana, izay indraindray oharin'ireo mpanohana ny fitondrana amin'i mpanorina Kemal Atatürk ao Torkia ankehitriny .
Noforonin'ny tovolahy fito tamin'ny taona 2011 ny N!DA, izay midika ho ” marika tsoraka” ao Azerbaijani . Mandrisika ny fiovana ara-politika sy ara-tsosialy ao amin'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny hetsika fifantohana amin'ny fanabeazana ny N!DA . Roa taona taorian'ny fananganana azy, lasibatra , nosamborina ary taty aoriana nomena sazy ara-pitsarana lava ny mpitarika fototry ny hetsika .
Hatramin'ny androany, navotsotra ny fito tamin'ireo lehilahy valo izay voasambotra tany am-boalohany. Kanefa milaza ny fanamelohana vaovao mahazo an'i Mammadov sy Ibrahimov fa mbola lasibatry ny manampahefana ny hetsika .
Handany ny fotoana tsara indrindra amin'ny androm-piainany any am-ponja ireo lehilahy roa noho ny fandrangitana ny fitondrana manankarena solika izay mamihina ny zo sivilin'ny olom-pirenena sy manitsakitsaka ny fahafahany .
Nampijaliana sy nogadraina, nefa tsy nanenina
Efa namoaka filazana i Ibraimov fa niharan'ny fampijaliana izy tany am-ponja. Tao amin'ny taratasy nalefany avy any am-ponja, nanoratra izy hoe:
Voadaroka indray aho rehefa niezaka ny hanery ahy hanaiky ny fiampangana zava-mahadomelina ny polisy . Nilaza tamin'izy ireo aho fa tsy mbola nahita zava-mahadomelina teo amin'ny fiainako ary tsy afaka misambotra ahy fotsiny izy ireo noho ny fakana ny sarin'ny [ graffiti teo amin'ny sarivongana]. Vokatr'izany, nikapoka ahy mafimafy kokoa sy nangataka ahy hiaiky ny fiampangana izy ireo. Nanozona sy nanompa ahy izy ireo. Nesoriny ny patalohako, ary nandrahona ny ‘hanolana’ ahy izy ireo. Tsy nanan-tsafidy afa-tsy ny nanaiky ny fiampangana ahy aho noho izany. ‘Niaiky’ aho , ary nanao sonia ny fijoroana ho vavolombelona izay nomena ahy.
Nanao filazana manan-danja kosa i Bayram Mammadov talohan'ny didim-pitsarana ary nanamarika fa manome voninahitra azy kokoa ny hitoetra any am-ponja noho ny hiaiky ny heloka izay tsy nataony sy handohalika anoloan'ny fitondrana ao amin'ny fahitalavi-panjakana.
Tsy misy hanenenako na inona na inona. Raha afaka manao izany aho dia naveriko indray. Tsy tiako ny ho tsarovana amin'ny fialan-tsiny amin'ny teniko farany .Tsy manaiky ny fanagadrana ahy aho. Mankafy ny fahafahana aho.
Kanefa tsy liana tamin'ny fihainoana an'i Mammadov na namela azy hamarana ny teniny ny mpitsara :
Judge did not allow Bayram Mammadov to finish his final words. Right now, he is reading out his sentence. Bayram's hands are handcuffed from behind.
Tsy namela an'i Bayram Mammadov hamarana ny teniny farany ny mpitsara. Amin'izao fotoana izao, mamaky mafy ny didim-pitsarana izy. Nofatorana avy any aoriana tamin'ny rojo vy ny tanan'i Bayram .
Famoretana nandritra ny taona maro
Taorian'ny fisamborana azy, niara-niasa tamin'ny Amnesty International tany Etazonia ny renin'i Ibrahimov ary nanomana ity lahatsary momba ny zanany sy ny fanendrikendrehana niampangana azy sy Mammadov ity .
Tao amin'ny fanambarana niarahana izay nivoaka tamin'ny 6 Desambra, namoaka taratasy miantso ny governemantan'i Azerbaijan mba hampitsahatra ny fanenjehana sy ny fampijaliana noho ny antony ara-politika ny fikambanana mpiaro ny zo, ary hanafoana ny lalàna manameloka ny mpanohitra sy ny fahalalahana miteny sady mamoaka azy mirahalahy.
Kanefa toa tsy mieritreritra ny hampitsahatra ny zo hamoritra izay efa nihamafy niaraka tamin'ny krizy ara-toekarena mifandray amin'ny vidin-tsolika izay nilatsaka tamin'ny taona 2014 ireo manampahefana ao Azerbaijan.
Nampiditra lalàna mafimafy kokoa kosa izy ireo etsy andanin'izany. Tamin'ny 29 Novambra, namoaka lalàna ny parlemanta tao Azerbaijan fa hahazo sazy an-tranomaizina hatramin'ny 3 taona ireo izay manala baraka an-tserasera ny filoha. Ary handoa lamandy 569 hatamin'ny 853 dolara Amerikana ao amin'ny firenena iray izay ahitana ny karama farany ambany eo amin'ny 76$ isam-bolana.